Pony toy ny biby an-trano | Pets | Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Pony toy ny biby an-trano | Pets
Ny pôl dia tia ny ankizy, saingy tsy mora sy mora
Na dia fantatra nandritra ny taona maro aza ny fihetsiky ny pôrnia tany Alemaina, dia nisy zavatra iray nitovizan'ny onja-pony tamintsika. Matetika dia zavatra tsara ny manome ny zanakao iray andro fitsingerenana na fotoana hafa indray ny pô, angamba Kutschwägelchen.
Ankizy be fitiavana sy mahatsikaiky, saingy: mila toerana malalaka be ny lamasinina
Tsy misy maharatsy izany, satria ny fikarakarana ireo soavaly mahafinaritra ireo dia mety hahasoa ny zaza ihany. Saingy indrisy fa tena manota amin'ny toetr'ireo soavaly kely ireo izy ireo, izay matetika dia miankina amin'ny habibian'ny biby. Ny iray dia manamaivana ny soavaly manjavozavo ary mino fa afaka mahazo sakafo farafahakeliny sy karakarainy izy ireo. Tena hafahafa izy ireo; Fa ny biby tsirairay dia mila fari-ponenana mba hiaina fiainana salama mifanaraka amin'ny karazany. Eny koa ny piozintsika kely.
Pony toy ny biby fiompy ho an'ny ankizy
Hatramin'ny am-piandohana, raha tsy manana tany ampy ny mponina iray ao an-tanàna na manana havana any amin'ny firenena, tsy afaka ny hiatrika ny fihetsiky ny liona izy. Ny pone, araka ny nambarako, dia mila toerana - ary na dia kely aza. Te hipetraka amin'ny kijana izy hatramin'ny lohataona ka hatramin'ny fararano. Any amin'ny tanindrazany Nordic dia mitoetra izy na dia amin'ny ririnina aza. Noho izany dia tsy soavaly mavitrika ity!
Mazava ho azy, mila antsika mbola am-pamoloanao izay tokony ho toy izany fa lehibe ny ririnina na tahiry fahana (30-35 Zentner Hay eo ho eo) Azo antonona. Ary mitaky toerana be izany! Manana afon-tsakafo ihany koa izy io; satria tsy afaka miaina amin'ny ala ihany ny pony.
Ankoatr'izany dia mbola misy foana ny toeram-pivarotan-tsolika hiparitaka, satria na dia ny pony aza dia te-hafana sy malefaka. Tsy te hiresaka momba ny ora fiasàna akory aza izahay, satria mila mitondra azy ireo fotsiny ianareo mba hanadio ny trano fandroana isan'andro ary hanipy mololo vaovao. Ankoatr'izay, ny fikarakarana ny soavaly amin'ny solo-tena sy ny harona, satria raha tsy izany, tsy ho ela dia ho biby masiaka sy tsy misy dikany ianao.
Amin'ny fividianana pôlisy mahafatifaty dia misy fepetra mifandray. Aza mieritreritra fa ampy ny zaridaina. Ny tsara indrindra, ampy ho an'ny bitry vitsivitsy, fa tsy amin'ny pô ny.
Ity fanamarihana ity dia ho an'ny mponina an-tanàn-dehibe noho ny any ambanivohitra, izay matetika manome fepetra tsara kokoa. Ary ireo izay miaina any akaikin'ny firenena dia mety hahita fomba iray ahafahana mandray ny soaviny hividianana saha amin'ny toeram-pambolena sy fiompiana.
Tokony hotsarovana ihany koa fa ny pôdi dia tsy mora. Na mividy Icelander, Shetlander na Norveziana iray ianao, dia tsy maintsy miankina amin'ny biby iray momba ny 750 Euro - miankina amin'ny hazakazaka, ny fiakanjo sy ny filaminana. Ankoatr'izany, misy toeram-pivarotana, fitaovana, tetezana, saddlery, fiaramanidina sy fanakanana ny akoho miaraka amin'ny mpanefy vy.
Ankizy sy pôlisy
Na izany aza, raha efa nametrahanao ireo olana rehetra ireo ianao dia tsy tokony hisalasala hividy. Aza mety halaim-panahy hividy soavaly mora. Matetika dia misy zavatra ao ambadik'izany. Na ratsy ny biby na tsy marary, marary, angamba marary.
Tokony hotsaroana ihany koa ny antony tianareo hividy pô ao. Ho an'ny fiarandalambin'ny ankizy dia ampy ny kely indrindra. Raha te-handeha ianao dia tsy maintsy mividy islandey na norveziana. Ireo dia manana haavo eo amin'ny metatra sy zavatra ambonin'izany.
Amin'ny maha-izy azy dia tia ankizy ny lolo. Sarotra kokoa ny mieritreritra sary tsara kokoa noho ny ankizy miaraka amin'ny pony. Na mitaingina amin'ny fahavaratra izy, misintona fiara roa-kodiarana na mivelatra eo anoloan'ny sambon-kena amin'ny ririnina - dia tena namana namanao foana. Raha manana zaridao lehibe kokoa ianao, dia afaka mampiasa ity soavaly kely ity ho an'ny zaridaina. Araka ny habeny sy ny fihenany amin'ny sakafo, dia mbola ambony lavitra noho ny vokatra amin'ny soavaly goavambe aza.
Ankehitriny dia mety ho liana amin'ny toerana hividianana kiraro ianao. Eto ianao dia hahita gazetiboky biby isan-karazany manolotra sambo ao amin'ny sehatry ny dokam-barotra. Ao amin'ny gazety isan'andro ihany koa dia soavaly kely no atolotra ho an'ny fivarotana.
Ny biby an-trano tsara indrindra ho an'ny ankizy | Pets